Ha eedeyn WordPress | Martech Zone
90,000 haakaris waxay isku dayayaan inay galaan barnaamijkaaga WordPress. Taasi waa tirakoob qosol leh laakiin sidoo kale waxay tilmaameysaa caan ka ahaanshaha nidaamka maaraynta waxyaabaha ugu caansan adduunka. In kasta oo aan si caddaalad ah u aqoonsanno nidaamyada maaraynta maareynta, waxaan leenahay qaddarin qoto dheer, qoto dheer oo ku saabsan WordPress oo aan taageerno inta badan macaamiishayada ku rakibkeeda.
Anigu daruuri kuma raacsani aasaasaha WordPress kaasoo inta badan leexiya dareenka arrimaha amniga ee CMS. In kasta oo dadku ay ka beddeli karaan gelitaankooda maamul ee maamulka, faa'iidada ugu weyn ee WordPress ayaa had iyo jeer ahayd 1-riix rakib. Haddii aad rabto inay beddelaan soo galitaanka, taasi waa in ka badan 1 guji!
Intaa waxaa sii dheer, ma jecli xaqiiqda in shaashadda soo galitaanka ay tahay wado adag oo adag oo aan la beddeli karin. Waxaan aaminsanahay inay sahlanaan laheyd WordPress si loogu ogolaado waddo caadiya.
Taasi waxay tiri, hay'ad kasta oo dhista oo taageerta boggaga WordPress waxay ku hayaan inta badan mas'uuliyadda gacmahooda. Waxaan martigelinnaa dhammaan macaamiisheenna Flywheel tan iyo markii ay qabtaan shaqo la yaab leh oo ah la socodka amniga iyo hubinta furayaasha sirta ah. Sidoo kale, Flywheel waxay u baahan tahay inaad isticmaasho login ka duwan tan admin markaad la sameysato tusaale WordPress ah iyaga.
Waxaan haynaa macaamiil kale oo dhib badan kala kulmay WordPress s cilladaha, arrimaha waxqabadka, iyo maamulka adag. Kuwaas oo dhami maaha arrimaha WordPress, in kastoo. Waxay yihiin Arimaha horumarinta WordPress. Mid ka mid ah macaamiisheennu waa madal soo jeedin iib - oo waxay leeyihiin waxyaabo aad u habeysan oo ku baahsan boggooda oo dhan. Naqshadeeyay hay'ad kale, maamulka bogaggooda waa iska fudud yihiin iyadoo la adeegsanayo qaar ka mid ah meelaha gaarka u ah caadooyinka:
Isticmaalka Meelaha Gaarka ah ee Casriga ah, Foomamka cuf iyo xoogaa horumar mawduuc ah, DK New Media awood u yeeshay inuu u dhiso macmiil goob shaqaale oo dhan. Waxay u shaqeysaa si bilaa cillad ah shaqaalahooduna waxay yiraahdeen maamulku waa riyo.
Boggaaga WordPress iyo amnigaaga WordPress wuxuu kaliya u wanaagsan yahay kaabayaasha ay ku dhisan tahay iyo sida ugu wanaagsan ee horumarinta mawduuca iyo fiilooyinka aad ku dartay. Ha eedeyn WordPress… raadso horumariye cusub iyo meel cusub oo aad ku martigeliso!
Tags: ACFbeeraha caado saremawduucyada wordpress caadadaflywheelFoomamka culayskalamaanayaasha guushawada-hawlgalayaasha saresantuuqahorumarinta wordpresswordpress la jabsadaymarti gelinta wordpressamniga wordpresswpengine
Mar walba dib ugama laaban karno soo saaraha barmaamijka oo ma dhihi karno 'Adiga ayaa iska leh tan ayaa dhacday.'
Waan ku raacsanahay inay jiraan godad nabadgelyo oo WP waligood runtii wax ka qabanin, waana jeclahay 1 guji rakib. Si kastaba ha noqotee, waxaan jeclahay degel dheeri ah, sidaa darteed waxaan qaadi doonaa tallaabadaas dheeriga ah. Qaladkeygu wuxuu ahaa in kastoo aan abuuray koonto cusub oo uber ah username cusub, hadana ma aanan tirtirin akoonkii hore ee maamulka. Tani waxay u oggolaatay boggeyga in la jabsado.
Waxyaabahaan iska indhatirayaa way fududahay maxaa yeelay waxaan ku kalsoonahay kuwa sameeya meheradaha, laakiin waa mas'uuliyaddeena inaan noqonno ilaaliyeyaasha bartayada. Waxaan u baahanahay inaan xoojino boqortooyada sida ay ahayd.
“Intaa waxaa dheer, ma jecli xaqiiqda in shaashadda soo galitaanka ay tahay waddo adag oo adag oo aan la beddeli karin. Waxaan aaminsanahay inay sahlanaan laheyd WordPress in loo ogolaado waddo caadiya. ” Kuma sii raacsami karo. Xaqiiqda ah in shaashadda soo galitaanka ay tahay waddo si adag loo calaamadeeyay - the / wp-admin - adiguna ma beddeli kartid taasi waa, feker ahaanteyda, in la fududeeyo shaqada haakarisyada isku dayaya inay ku galaan bartaada. Waad ku mahadsantahay qoritaanka maqaalkan, waxaa jira waxyaabo badan oo aan aad ugu raacsanahay, Douglas.
Waxaa jira qalab kuu oggolaanaya inaad beddesho maamulkaaga iyo waddooyinka lagu galo:
Waxaan sidoo kale arkay plugins-ka, laakiin tani waxay u baahan tahay inay noqoto muuqaal muhiim ah oo qayb ka ah qaabeynta WordPress.
Jun 16, 2013 at 4: 49 PM
"… Faa'iidada ugu weyn ee WordPress had iyo jeer waxay ahayd 1-guji rakib". Runtii taas macnaheedu maahan, miyaad? Waxaan si buuxda ugu raacsanahay qodobka intiisa kale, in kastoo, iyo gaar ahaan waxaan ku raacsanahay inay nagu dhacayso wakiilo ahaan, martigelinta shirkadaha iyo horumariyeyaasha si ay u qabtaan shaqo fiican oo ah sugidda (bilaashka) CMS-ka taas oo inaga dhigtay dhammaanteen lacag aad u badan 10-kii ugu dambeeyay sano.
Jun 16, 2013 at 10: 26 PM
1-riix rakibaadda iyo sii fududaanta dayactirka ayaa gabi ahaanba ah waxa qarxay kobaca WordPress. Ma dhahayo taasi waa faa'iidada kaliya - waxaa jira boqolaal kale. Laakiin waxaa jira nidaamyo kale oo badan oo bilaash ah oo CMS ah oo halkaa ka maqnaa rakibidda fudud ee WordPress ay sameysay… markii dadku awoodi waayeen inay iyagu qaabeeyaan, way iska daayeen.
Jun 16, 2013 at 11: 31 PM
Waan helayaa waxaad leedahay, laakiin 1-riix maahan muuqaal WordPress ah, waa muuqaal akoon martigelin ah. WP waxay caan ku tahay 5 daqiiqo rakibid, ma ahan 1-riix rakib. 5 daqiiqo rakib oo kuu oggolaaneysa inaad xulato username weligiis illaa nooca 3.0. Hawl-wadeennada ayaa si fudud u beddeli kara WP 1-guji Ku qor qoraalka si ay magaca isticmaale u noqdaan mid ammaan ah.
WP way qarxisay maxaa yeelay bulshada taageerta waxay gaartay culeys aad u weyn, wax CMS kale ay ku fashilmeen inay sameeyaan. Fududeynta rakibida iyo dayactirka socda ayaa xaqiiqdii door muhiim ah ka ciyaaray taas, laakiin waxaa jira dhowr arrimood oo saameyn aad u ballaaran ka yeeshay taas (tusaale soo bixitaanka noocyada boostada ee caadiga ah).
Qodob kale oo ah in la sameeyo ayaa ah in aysan jirin 90,000 oo haakaris ah oo halkaas jooga oo isku dayaya in ay jabsadaan qalabyada WP ee la yaqaan. Taasi waa wax yar oo been abuur ah. 90,000 cinwaanada IP-ga uma dhigmo u dhigma 90,000 haakaris, kuwaas oo si fudud u sameyn kara dhib badan oo ka badan botnet-ka.
Guud ahaan, waan kugu raacsanahay waxaad sheegayso. Waa inaan qaadnaa tillaabooyin aan ku sugeyno WP haddii aan u soo bandhigeyno xalka macaamiisheenna. Helitaanka WP-gaaga oo la jabsaday oo lagu eedeynayo badeecada asaasiga ah waxay la mid tahay inaad fayras ka qaadatid kombuyutarkaaga oo aad ku eedeyso amni-darrada Microsoft. Waxaan u baahanahay inaan taxaddarno ama aan ku dhammeyno xulashooyinka amniga ee aanan dooneynin in lagu daro badeecada aasaasiga ah.
Jun 25, 2013 saacadu markay ahayd 9:34 AM
tani runti waxay ahayd mid wargelin ah - ma jecla inta badan waxa aan ka arko internetka. wadaagista 🙂